Different between web designer and web developer — MYSTERY ZILLION
May 2012 edited May 2012 in Daily Life
I've heard several people talking about web developing. And i hear two words, really confusing, web designer and web developer. How is the difference between that. Any one explain me?
အစ်ကိုသင်တန်းတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့က Web Essentials ဆိုပြီးဖွင့်တယ်၊
တစ်ချို့က Web Design ဆိုပြီးဖွင့်တယ်။ အခြေခံအဆင့်မှာတော့သူ့ဟာသူဘယ်လိုပဲနာမည်တပ်တပ်သင်တာတွေ
အဲဒိအဆင့်ပြီးရင်တော့ Web Developer ဆိုရင် Dynamic Level ဖြစ်တဲ့ ASP.net, JSP, PHP, Python, Ruby အဲဒိဘက်တွေကိုသွားမယ်။ Web Developer ဆိုတာက web application တစ်ခုမှာဘယ် button နှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ၊ Database တွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မလဲ စသည်ပေါ့။ Application ကြီးတစ်ခုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ function ပိုင်းတွေကိုရေးရတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒိလိုမွစိတက်နေအောင်ရေးထားတဲ့ Coding တွေကိုလူတွေအမြင်မှာလှလှပပလေးဖြစ်အောင်နေရာချတဲ့အပိုင်းတွေ၊ Graphic တွေ Animation တွေဘာတွေ
နဲ့အလှဆင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ Web Designer ကလုပ်ရတယ်။
MZ မှာအရင်က discuss လုပ်ခဲ့တဲ့ post အဟောင်းတွေပါ။ တော်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ post တွေပါ။